Bebhala izincoko phantse lonke iza ebekiweyo. Oku kuthetha ukuba kufuneka ukuba ubhale phantsi koxinzelelo, kwaye oku mnandi kwaphela. ngoko ke, Checkout le phezulu 6 iingcebiso ukubhala indlela isincoko engcono. Ezi ziya kukunceda ubhale angqalileyo, kwindawo kunye nezincoko umdla uya kukuzisela wena babene olungileyo.
1. Qokelela iingcinga zakho
Thevery inyathelo lokuqala ukuza isihloko. Ukuba sele unayo isihloko, kufuneka nje ukuba ugxile uphando lwakho kwicala elifanelekileyo. Qala etheza imithombo ebalulekileyo kuphela online, yaye ukubhukmakha kubo. Esi isigaba yophando, ngoko ke akuyomfuneko ukuba ufunde yonke into ngokweenkcukacha. Ngokulondoloza le bookmarks, unako ukubuyela kubo ukuzifunda kakuhle phambi kwakho bhala. Ukuba ufuna ukuza isihloko ngokwakho qiniseka ukuba uya kubhala ngayo somethingyou ulungile kakhulu kwi- enoba uyithandayo, Uhlalutyo psychological siqu, ngezimvo mbandela impikiswano, etc.
2. Fumana uncedo ukuba awunayo Time
Ukuba awunaso ixesha okanye izakhono ukuze ubhale isincoko esisemgangathweni musa ukuba ihlehlise izinto kwakhona. Qiniseka ukukhangela i-ncomo ezimbalwa essaywriters phezulu usizo. Iqela lobungcali ababhali ziya ibhale isincoko lonke kuwe phambi kwexesha elibekiweyo. Onke amalungelo ukuya sincoko iya kugqithiselwa kuwe. ngoko ke, ungaba ukwabelana, yokuprinta, phambili nokondlala isincoko kwamathuba yakho.
3. Yenza Ideas zakho kulo lonke Izincoko
Xa zwabha ukubhala isincoko sakho, ukuze uqonde ukuba bayeke ukuya kwicala omtsha ngaphezu injongo yokuqala. ngoko ke, ungaphindela umva uze ufunde ekuqaleni isincoko, kwaye uzame ukudibanisa lonke iphepha. Kufuneka sivumele intshayelelo, umzimba lesincoko kunye nesiphelo ukuba 3 ngamaziko azimeleyo. Yonke kufuneka ukuba flow kamnandi, ngendlela enengqiqo. Akukhathaliseki ukuba utshintshe ingqondo yakho, okanye ukutshintsha imbono yakho into, kufuneka nje ukuba basebenze yonke mfundo.
4. Soloko Nikeza Imithombo zakho
Nokuba isincoko yakho igqibelele ukusuka kwindawo zegrama zesimbo lwembono ... ukuba imithombo bakho na ezicatshulweyo into ekuthiwa zokuveza. Ngokuqinisekileyo sifuna ukuthintela iingxaki ezifana. ngoko ke, nokuba kokuthumela inyour amazwi into esiye saxoxa Bya weqonga odumileyo, umbhali, okanye oziphethe, kufuneka Ukucengceleza umthombo ngqo. Inyaniso yokuba nithi ngawakho amazwi omnye umntu uluvo lwakho ... loo nto nangoku na umbono wakho.
5. Kulungiswe Isihloko owabelwa
Musa beat ngeenxa ematyholweni ... ukuba utitshala wakho ikunike isihloko esithile, kufuneka mpikiswano kanye ukuba. Nokuba awuyithandi isifundo, kufuneka uphando, uze ufunde ngakumbi kumxholo online. ke, uqale ukubeka ndawonye isincoko sakho kodwa sinikele ingqalelo ukuze kulungiswe nesihloko eyabelwe. Phendula imibuzo ethunyelwe, kwaye ekupheleni uvumelekile ukuba abe nemibono kancinane usimise eyakho imbono ngalo mbandela.
6. Sebenzisa Imithombo eziliqela
Musa ziyaxinga ne-intanethi kuphela. Ukuba ukubhala isincoko American History umzekelo, uqale singa indlu izichazi-magama, iincwadi yezifundo, DVD kunye eshukumayo eziphathelele AmTop 6 Amacebiso On Indlela To Bhala Imbali Best Essayerican, kunye namaphephancwadi abadala kunye amanqaku ngembali. Olu hlobo "iintloko" uya zingasinceda ukuba babhale izincoko ezizodwa. oovimba bakho ukuba 100% imithombo online. Bangakwazi nayiphi na imithombo, nokuba-ndlebe olwenziwa kunye nomfundi History PhD okanye umzekelo. Yiba creative, uchithe ixesha esemgangathweni uphando kwaye uya kulawula ukubhala isincoko ogqibeleleyo!
ifundwe: Usuku lwabanesifo somdlavuza - EtiMnga 1, 2017 : isincoko, Theme, ezigxeka, Quotes, imiyalezo, Indlela Bhiyozela, Speech
« Indlela Fumana lakho College njingalwazi Side Good ?
6 Tips Of Ukufumana Writers Izincoko »